Saalax Bad baado “kuwa Saaxibaday ah ee Baarlamanka ku haray waxaan leeyahay diinta islaamka soo gala meeshaas Islaamnimo mataal aniga hadda ayaan Muslim ahay”!. | Halganka Online
Saalax Bad baado “kuwa Saaxibaday ah ee Baarlamanka ku haray waxaan leeyahay diinta islaamka soo gala meeshaas Islaamnimo mataal aniga hadda ayaan Muslim ahay”!.
Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Bad Baado oo dhawaan sheegay in uu ka Towbad keenay kamid ahaashiyaha Dowladda KMG Somalia ayaa maanta kashifay sir u qarsooneed Dowladda KMG ah ee Shariif madaxda ka yahay.
Bad baado oo ka qayb qaadanayay Barnaamijka “Hadal haynta Jimcaha” ee ka baxay Idaacadda Maxaliga Hornafrik magaalada Muqdisho ayaa Daboolka ka qaaday arrimo badan oo Mugdi uga jiray Dadka fara kutiriska ah ee la dhacsan Dowlada KMG ah ee Muqdisho ka joogto meelo kooban.
Isagoo ka Jawaabayay su’aalo muhiim ah oo la weydiiyay ayuu sheegay in kamid ahaashiyaha Dowladda KMG ah ay tahay Dembi laga galey alle thumma shacabka “Hadda waxaan is moodaa Nin Muslim ah oo kasoo baxay Jahli iyo xero gaalo” ayuu yiri Saalax Bad baado.
Sarkaalkan horay uga tirsanaa Baarlamanka DKMG Somalia wuxuu carrabka ku dhiftay in madaxda dowlada KMG ah ay ku farxi jireen duqaymaha ay Ciidanka AMISOM ka gaysanayaan xaafadaha magaalada Muqdisho oo ay Dadka Rayidka ah deganyihiin.
Wuxuu carabaabay in madaxtooyada laga duqeeyo shacabka madaxda dowladuna ay aad u qoslaan marka madaafiicda laga tuurayo Villa Somalia “marka Xabashida duqaynayaan shacabka kuwa dowlada hogaamiya waxay na dhihi jireen Shabaab ayaa la duqaynayaa waa kuwaas Kaamirada ayay ka dhax muuqdaan shabaabka waa lalaayay, saacado kadibna waxaan Idaacadaha ka maqli jirnay baroorta shacabka, waar waxa lalayna waa shacabka Xildhibaanada waa lasiraa” saalax Bad baado.
Dadkii dhagaysanayay ayaa aad ula dhacay markii saalax Bad baado yiri “kuwa Saaxibaday ah ee Baarlamanka ku haray waxaan leeyahay diinta islaamka soo gala meeshaas Islaamnimo mataal halkan aan joogo 15 jir aan weligiis gaal labiya cabin baaa jooga”
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo Al Xizbul Islaami ayaa aaminsan iyo madaxda dowlada KMG ah ay Murtadiin yihiin balse hadda waxaa la arkay in Xildhibaan iyaga katirsanaa uu qirayo diin ka baxooda.
Sidoo kale Saalax Bad Baado wuxuu amaanay waxqabadka muuqda ee Wilaayaadka Islaamiga Mujaahidiinta, wuxuu sheegay in uu booqday Sh/Hoose iyo Sh/Dhexe islamarkaana uu soo arkay waxqabad dhab ah oo ay sameeyeen mujaahidiinta sida Zako qaybin iyo dayactir ay ku sameeyeen Kanaallo aan ladayactirin muddo 20 sano ah.
Ugu dambayntii Saalax Bad baado ayaa sheegay in uu bilaabay barashada Qur’aanka Kariimka iyo Axaadiis islamarkaana uu meel iska dhigay howlihii uu ku baran jiran Dasaatiirta Gaalada iyo sharciyadooda gacan ku rimiska ah.
« Sarkaal katirsan Xisbul Islaam oo Cod qarsoodi ah laga qabtay isagoo ku faraxsan qabsashadaii Dhoobleey dhiiri gelina u samaynaya Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo ONLF.(dhagayso) Beelo ka baxay Isbahaysiga Qabuura Galeenka G/gaduud kadib markii uu General Galaal Maleeshiyaad u gaar ah ka qortay Guriceel iyo Dhuusamareeb “Xog dhamaystiran”. »